Embraer 135 hop DOWNLOAD! ပြင်သစ်လေကြောင်းများအတွက် FSX & P3D - Rikoooo
အရွယ် 43.4 ကို MB
downloads ရယူရန္ 18 943
စီမံကိန်းပွင့်လင်းက Sky အားဖြင့်မော်ဒယ်, ပေါလု Craig အားဖြင့် repaint
အဘို့အပြီးအစီးအထုပ် FSX / ရေနွေးငွေ့ & P3D အသစ်ကလေကြောင်းလိုင်း Hop အတွက် Posky Embraer ERJ-135 ၏! ပြင်သစ်လေကြောင်း livery အဘို့, မှတ်ပုံတင်သည့် F-GRGR, CN 145236 ။ 3D ကို virtual cockpit ပါဝင်သည်, 2D panel က, Animation, FMC, Manual, ထုံးစံအသံ, VC ကို texture ဆုံးမခြင်းများအတွက် P3D နှင့်ပိုပြီး။
Author: Project မှပွင့်လင်းက Sky နေဖြင့်မော်ဒယ်, ပေါလု Craig အားဖြင့် repaint